musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Ane makore gumi nemasere-anoshanda seMumiriri mutsva wePort Kana
avhiyesheni • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
LR - Kanaji wePort Authority Commissioner Robyn Hattaway naJessica Maxwell, Mumiriri wePort Canaveral. Kutendeseka Kanaveral Port Authority
Pamusangano wa Nyamavhuvhu weCanaveral Port Authority Board of Commissioners, Port Commissioner Robyn Hattaway akazivisa kudomwa kweR Rockledge High Chikoro Jessica Maxwell sePort Canaveral Mumiriri kuti ashande semumiriri waKomisheni Hattaway munharaunda yenharaunda. Jessica ndiye Mutungamiriri Hattaway wekutanga wePort Ambassador kumisikidzwa, uye pazera remakore gumi nemasere, ndiye munhu mudiki pane vese kushanda semumiriri weCPA Board of Commissioners.
Wese Kana Canaveral Port Authority Commissioner anogona kudoma kusvika kuvanhu vaviri kuti vashande semumiriri weKomisheni munharaunda yechiteshi.
Port Ambassadors vanoita nharaunda kusimudzira kunzwisiswa kukuru kwebasa rePort Canaveral mudunhu iri.
Ivo zvakare vanowedzera ruzivo rweveruzhinji uye nzwisiso yeanoverengeka Port Authority marongero ehurongwa.
"Sevatariri vePort, tinofanirwa kutarisa kune vatinoshanda navo mune ramangwana uye kugadzirira chizvarwa chinotevera kutungamira," akadaro Commissioner Hattaway. “Jessica anofara kudzidza nekugovana chiono chedu nechizvarwa chake. Ndinovimba muchabatana neni mukumugamuchira pachinzvimbo chake chitsva sePort Ambassador. ”
SaMumiriri wePort, Jessica achabatsira Commissioner Hattaway nechirongwa chePort's Junior Port Ambassador kuti agovane ruzivo rwake kubva muchirongwa cheHELM, nechinangwa chekuvaka hukama nekuwedzera ruzivo rwevanhu nerutsigiro rwezvinhu zvakakosha zvePort pakati pevechidiki munharaunda.
Semudzidzi paRockledge High Chikoro, Jessica akapinda muchikoro Kubatsira Kudzidzisa Vatungamiriri muMaritime (HELM) chirongwa. Akashandawo saMutungamiriri weBattalion weRockledge High Chikoro ROTC. Anokwikwidza anoshanda, chirongwa cheJessica chekupedza kudzidza kunyoresa muUS Navy chakabviswa mushure mekunge tsaona yekutasva bhiza yaburitsa kuti akarwara neosteosarcoma, gomarara repfupa rakakonzera kurasikirwa kwerumwe ruoko gore risati rapera.
Port Canaveral, iri muFlorida, iri gedhi rerwendo uye nhandaro pamwe nenhumbi uye zvigadzirwa. Yakagara ichizivikanwa senzira yekuenda kumiganhu mitsva mukufamba kwemuchadenga. Port Canaveral inomiririra angangoita mamirioni mashanu emari inofambisa vafambi kuburikidza nenzvimbo dzayo-dze-iyo-hunyanzvi matemu uye mamirioni matanhatu matani enhumbi gore rega.
Tourism uye Varaidzo kuPort Canaveral
KuPort Canaveral, vashanyi vanogona kuona kunakidzwa kwekuburitswa kwedombo parinozeya zuva pagungwa. Iyo Cove inzvimbo yekumberi yemvura yekuvaraidza kuPort Canaveral nemaresitorendi, lounges, mashopu, charter boats, uye casino chikepe. Mazhinji maresitorendi eCove ane matafura ekunze uye tiki mabara, nzvimbo dzakanaka dzekuona ngarava dzinofamba kana kungonakidzwa nemhepo yemhepo. Kana zuva rovira, kune maDJ, anorarama mabhendi, achitamba, uye karaoke, o uye musasa.